यस्ता छन् काँक्रो खानुका फाइदाहरु
एजेन्सी । काँक्रो यस्तो फल हो, जुन बजारमा वर्षैभरि पाइन्छ । यो नेपाली जनजीवनमा चलेको खान्की पनि हो । काँक्रो चिरा पारेर नुन, खुर्सानी दलेर खानुको मज्जा नै बेग्लै । काँक्रोको प्रयोग अचार र सलादमा बढी हुन्छ । काँक्रोको पातलो गोलाकर पत्रलाई दुवै आँखामा राखेर एकखालको फेसियल थेरापी पनि गर्ने गरिन्छ । विस्तृतमा
यस्तो रहेको छ मंगलबारको तपाईको भाग्य– कात्तिक २६ गते
घाममा बसेर सुन्तला खाँदा फाइदै फाइदा !
के हो किवी फल ? स्वास्थ्यलाई के–के फाइदा गर्छ ?
कफ र खोकीलगाएतका समस्याबाट छुटकारा पाउन अदुवा
वजन कम गर्नका लागि बेसार पानी !
तुलसीको पूजा घर–घरमा गरिन्छ । तुलसीको निकै ठूलो पौराणिक महत्व छ । तुलसीलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदमा तुलसीको विरुवालाई स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिएको छ ।
रक्सी सेवन गर्दै नगर्नुहोस्
एजेन्सी । थोरै मात्रामा गरिएको रक्सीको सेवनबाट पनि मानिसको दिमागमा हानी पुर्याउने कुरा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । थोरै मात्राको रक्सी सेवनले पनि मानिसको शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्दछ ।
महिनावारी हुँदा कस्ता खानेकुराहरु खानुपर्छ ?
एजेन्सी । महिनावारीको विषयमा कोहि पनि खुलेर कुरा गर्न चाहाँदैनन् । तर हरेक महिलाहरु महिनावारी हुनै पर्ने हुनाले यस सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ ।
तौल घटाउन समेत भिन्टी खानुहाेस्
एजेन्सी । भिन्टी तरकारीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा यसको धेरै परिकार समेत बनाइन्छ । अचार, तरकारी लगायत विभिन्न परिकारहरु भिन्टीबाट बनाइन्छ ।
'संसारमा पैसाको कुनै कमी छैन, कमी छ त केवल सपना देख्नेहरूको'
एजेन्सी । चीनकै एकजना सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका ज्याक माले आफ्नो ५५औं जन्मदिनका दिन समूहको अध्यक्ष पद छाडेको घोषणा गरे ।
ओठको कालोपन कसरी हटाउने ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस्
एजेन्सी । मानिसको अनुहार र बाहिरी सुन्दरता तब राम्रो देखिन्छ, जब उसको छाला दागरहित, सुन्दर कपाल, गुलाबी ओठ हुन्छ । मानिसको सुन्दरता बढाउनका
जीवनमा सफल बन्न यस्ता छन् सुत्रहरु
हरेक मानिसको सफल बन्ने सपना हुन्छ । तर, कसरी भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन । ठूलै काममा हात हाल्नुपर्छ भन्ने होइन, सानो कामबाट पनि सफल बन्न सकिन्छ । विश्वका सफल प्राय व्यवसायीले सानो क्षेत्रबाटै कामको सुरुवात गरेका थिए । तीमध्ये एक हुन् स्टिभ जब्स । एप्पल कम्पनीका संस्थापक, पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सिईओ जब्सको सन् २०११ मा ५६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । सफलताका लागि उनले बाँडेका केही टिप्सहरु यस्ता छन् ।
टुसा उमारिएको गेडागुडीमा मासुमा भन्दा पनि बढी प्रोटिन पाइन्छ
स्मरण शक्ति बढाउन नियमित व्यायाम
सन्तुलित जीवनशैली स्वस्थ्य जीवनको प्रमुख आवश्यकता हो । शरीर स्वस्थ्य राख्न नियमित कसरत अर्थात् व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यायामले शरीरको सबै अंगलाई मजबुत गराउँछ । जसले हामभीलाई रोगसँग लड्न शक्ति प्रदान गर्दछ ।